Myanmar Subtitle Movie Sharing: Fifty Shades Of Grey (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများကို တစ်နေရာထဲရရှိနိုင်အောင် ဆိုက်များမှ ကူးယူစုစည်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ) ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုသူများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကွာလတီအကြည်များဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်...
Post By : ChannelMyanmar
Video ဒေါင်းယူနည်း ၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကို မလုပ်တတ်ပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်၍ သွားရောက်လေ့လာပါ ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ... ။
Labels: 18နှစ် ပြည့်သူများသာ ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Unknown 15 July 2016 at 19:19
DjjoeManGalaxy 30 July 2016 at 02:53
Yan Noung6November 2016 at 03:39
Kyaw Xoe 11 March 2017 at 19:49
Myanmar Subtitle Movie Sharing ( For Android ) ဆော့ဝဲကို သင့်ဖုန်းထဲ ထည့်ထားကြဖို့မမေ့နဲ့နော်
သင်လိုချင်သော Movie စာရိုက်ရှာရန်
ကြိုက်ရာ သီးသန့် ရွေးဖွင့်ပါ
English / China / Thai / Korean / Japan ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Cartoon ကာတွန်းကား ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
India ကုလားကား ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
18နှစ် ပြည့်သူများသာ ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Movie ဒေါင်းယူနည်း ၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း
လူကြိုက်အများဆုံး Movie များ...
Movie ဒေါင်းယူနည်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူနည်းကို အောက်တွင် ပုံများဖြင့် တစ်ဆင့်ခြင်းစီ ပြသထားပါတယ် ။ "Baidu အကောင့် အသုံးပြုလို...
Aladdin (1992) မြန်မာစာတန်းထိုး
အာလာဒင်ဆိုတဲ့ လမ်းသရဲကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ၏မိတ်ဆွေအဘူးဟုခေါ်သော မျောက်ကလေးနှင့်အတူ အက်ဂဘာမြို့တွင်နေထိုင်သည် ။ တစ်နေ့တွင်နန်းတော်မှ ထွက်...
Bahubali 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Bahubali 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး) Video ဒေါင်းယူနည်း ၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကို မလုပ်တတ်ပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်၍ သွားရောက်လေ့...
Fifty Shades of Grey ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ လတ်တလော လူပြောအများဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်နေပါတယ်။ ရုံမတင်ခင်ကတည်းက စောင့်ကြည့်ဖို့ အားတင်းထားကြသူတွေ မျ...
Brothers 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Brothers 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး) Video ဒေါင်းယူနည်း ၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကို မလုပ်တတ်ပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်၍ သွားရောက်လေ့...
Jodhaa Akbar (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jodhaa Akbar (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး Video ဒေါင်းယူနည်း ၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကို မလုပ်တတ်ပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်၍ သွားရောက...
Baidu အကောင့် အသုံးပြုလိုသူအားလုံး မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ရန်
Movie များ ကြည့်ရှုရာနှင့် ဒေါင်းယူရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် အောက်တွင် Baidu အကောင့်အား တင်ပေးထားပါတယ် ။ ဤ Baidu အကောင့်အား အသုံးပြုလိုသူအာ...
► March 26 - April2(57)
► March 27 - April3(143)
▼ March 20 - March 27 (111)
Wall E (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Barfi (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Up (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tom and Jerry meet Sherlock Homes ( မြန်မာစာတန်းထိ...
Tom & Jerry Spy Quest (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The SpongeBob Movie Sponge Out of Water (2015) မြန...
The Smurfs 1 (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Secret World of Arrietty (2010) မြန်မာစာတန်းထု...
The Polar Express (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Pirate Fairy (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Peanuts Movie (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Nut Job 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
The Lorax (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Little Prince (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Lion Guard Return of the Roar (2015) မြန်မာစာတ...
The Last - Naruto the Movie 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိ...
The Jungle Book (1967) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Incredibles (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The House of Magic (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Good Dinosaur 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
The Croods (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Boxtrolls (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Book of Life (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The 7th Dwarf 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Tangled Ever After (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tangled (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tad, the Lost Explorer (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Spirited Away (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
Spirit Stallion of the Cimarron (2002) မြန်မာစာတန်...
Sinbad - Legend of the Seven Seas (2003) မြန်မာစာတ...
Shrek the Musical (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Shrek (2001) (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Rise of the Guardians (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ratatouille (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ponyo (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Planes2Fire & Rescue 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Planes 1 ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Penguins of Madagascar 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Paranorman 2012 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Paddington (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
My Neighbor Totoro 1988 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Mulan (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mr.Peabody & Sherman (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Monster House (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Monster High-Scaris City of Frights (2013) မြန်မာစ...
Maya the Bee 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Masha and The Bear 01 - 10 (အမွှေစိန်) မြန်မာစာတန်း...
Lilo & Stich2Stitch hasaGlitch (2005) မြန်မာစာ...
Legend of the NeverBeast 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )...
Kung Fu Panda3(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kung Fu Panda2မြန်မာစာတန်းထိုး
Kung Fu Panda 1 မြန်မာစာတန်းထိုး
Justice League Gods and Monsters (2015) မြန်မာစာတန...
Inside Out 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Ice Age The Meltdown (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ice Age (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
How To Train Your Dragon (2) 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိ...
How To Train Your Dragon (1) Gift of Night Fury (2...
Hotel Transylvania2(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hotel Transylvania 1 (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Home (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Grave of the Fireflies (1988) မြန်မာစာတန်းထိုး
Frozen (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Final Fantasy VII (2005) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Escape from Planet Earth (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Epic ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dragon Nest Warriors' Dawn 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး...
Despicable Me3Minions (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Despicable Me2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Despicable Me 1 (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Corpse Bride 2005 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Coraline (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Cat Shit One (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Brother Bear (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batman Bad Blood 2016 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Bolt (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batman Under The Red Hood 2010 ( မြန်မာစာတန်းထိုး ...
Back To The Jurassic (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Astro Boy (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Asterix Le Domaine Des dieux 2014 ( မြန်မာစာတန်းထိ...
Arthur Christmas 2011 (မြန်မာစာတန်းထိုး )
Hotel Desire (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
Deadpool (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
(James Bond) You Only Live Twice (1967) မြန်မာစာတန...
(James Bond) Thunderball (1965) မြန်မာစာတန်းထိုး
(James Bond) Spectre (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
(James Bond) Skyfall (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
(James Bond) Quantum of Solace (2008) မြန်မာစာတန်း...
(James Bond) Goldfinger (1964) မြန်မာစာတန်းထိုး
(James Bond) From Russia with Love (1963) မြန်မာစာ...
(James Bond) Dr.No (1962) မြန်မာစာတန်းထိုး
(James Bond) Casino Royale (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး...
Alvin and The Chipmunks4The Road Chip (2015) မြန...
Alvin and the Chipmunks3Chipwrecked (2011) မြန်မ...